Ahoana no hahatonga ny Vehivavy ho amin’ny Fitiavana sy Mpifoka: ara-teknika, tsy azo sakanana
Telo fanontaniana enina ho raiki-pitia, ireo hevi-diso, na ny zava-misy.»Izany dia tsy sarotra, ny fitiavana ny marina, dia misy lisitry ny telo fanontaniana enina mba hitaona ny hafa.»Ny herin’ny teny dia tena tsara kokoa noho ny an’ ny vatana. Isika rehetra dia te ho voafitaka isika rehetra dia te-fa indray andro any, olona iray nampifandraisiny ho antsika, fa ny tovovavy latsaka amin’ny fitiavana isika. Mety ho namaky ny teny tao amin’ny haino aman-jery izany lisitry ny telo-fanontaniana enina ho raiki-pitia. Hevi-diso, na ny zava-misy, izany dia nanapa-kevitra ny hamantatra io lisitra io ho anao. Ny fampiasana amim-pitandremana. Ao amin’ny fanadihadiana nataon’ny amerikana psikology Arthur Aron dia nanapa-kevitra hanadihady ny fihetseham-po fahamoram-pahavoazana. Lavitry ny atao hoe»zava-miafina», izay mety ho hanafina ny ampahany amin’ny zava-misy sy ny fihetsika, ny lisitry ny telo-enina fanontaniana dia manokatra ny varavaran ny nofy, amin’ny lasa, ny tsy nahatsiaro tena ary mamela anao mba hanafaka amin’ny fomba an-kolaka. Akaiky fitanisan-keloka: fony aho filohan’ny am-bava ny torohevitra ao amin’ny raharaham-barotra an-tsekoly, izaho no nanao be dia be ny fampiasana ity lisitra mandeha ny»fikarohana»kandidà, mba hanakorontanana nicely. Nandritra ny am-bava, ny tany rehetra foana vonona amin’ny zava-drehetra isika, dia foana ny valiny vonona, toy ny mandritra ny asa fanadihadiana: fantatsika fa izahay tsy maintsy milaza, fantatsika izay tsy hoe mba ho fahatsapana tsara. Ataovy ao an-tsaina izany lisitry ny telo-fanontaniana enina ho raiki-pitia. Raha manapa-kevitra ny hanandrana ny manandrana azy amin’ny hariva ohatra, tsy manome antoka fa ho raiki-pitia na fa ny tovovavy eo anoloan’ny te-tena ho amin’ny fifandraisana miaraka aminareo, saingy zavatra iray no azo antoka: dia efa nianatra zavatra betsaka momba anao sy momba ny hafa. Ao amin’ny voalohany traikefa, ny mpikaroka nanampy bebe kokoa ny fiainany manokana ho telo ny fanontaniana enina, mangataka ireo mpandray anjara mba hitandrina ny efatra minitra fahanginana, ary nanana fifandraisana. Tsy ambanin-javatra ny hery ny izy, ny hamafin’ny rehefa manao izany lalao telo-fanontaniana enina. Raha mandeha amin’ny daty voalohany-dia, tonga soa eto amin’ny vavy (eny, ianao no mialoha) ary manolotra azy ny daty tany am-boalohany, tahaka ny efa angamba tsy mbola niaina mihitsy. Hazavao aminy fa ho indray mandeha, efa nanapa-kevitra ny hanomana io daty io ho toy ny asa fanadihadiana sy mangataka andiam-panontaniana, ny sasany akaiky kokoa noho ny hafa. Azonao atao na ny soso-kevitra ho azy ny mamaly ao amin’ny voalohany (ambaratonga: Atsinanana), dia namaly tamin’ny voalohany, ary avy eo ianao rehefa avy (ambaratonga: mpanelanelana), na ianareo milaza na inona na inona ary izany dia ny iray ihany no mba mamaly telo ny fanontaniana enina nandritra izany FOTOANA voalohany (ambaratonga: mafy). Bonus: mafy anivon’ny manome anao sahady ny antony faharoa fanendrena, aiza ianao no hamaly, nony farany, ireo telo fanontaniana enina, izany no antony fa mety ho ny safidiny. Aza adino ny mametraka ny tovovavy eo anatrehanao amin’ny matokia, fa raha tsy izany, dia mety haingana tahaka ny resadresaka amin’ny Raphael Mezrahi. Alohan’ny hanadihadiana ny lisitry ny telo-fanontaniana enina, ary ifanakalozy hevitra ny vokatra, jereo ity malaza list, izay mizara ho faritra telo. Mariho ny tanora na ny andevozin’ny kokoa ny tambajotra sosialy: fandrenesana, ity ny lisitry ny telo-enina ny olana, dia ny kely toy ny Manontany.fm, fa eo amin’ny fiainana tena izy, loha-doha, miaraka amin’ny vava. Eto izany dia, izany malaza lisitra. Rehefa mamaky ilay fanontaniana, dia nifidy ny dimy manazava ny fahombiazana. Enina) Raha afaka hiaina mifanaraka amin’ny sivy taona ary mitana na ny saina na ny tena ny telopolo taona farany enim-polo taona ny fiainana, inona no fidinao. A) Raha toa ka mety hanova zavatra iray amin’ny fomba izay tsy manam-pahaizana, fa dia inona izany no hatao. Unum) Maka efatra minitra mba hilaza ny fiainana ny mpiara-miasa amin’ny antsipiriany betsaka araka izay azo atao. Unieux) Raha toa ka tsy afaka hifoha rahampitso rehefa nahazo toetra iray na ny fahaiza-manao, mety ho inona izay. Telo) Raha ny baolina kristaly afaka milaza aminareo ny marina momba anao, ny fiainana, ny ho avy na inona na inona, inona no tianao ho fantatra. Efatra) Dia misy zavatra efa manonofy ny. Fa maninona ianao no tsy notanterahina. UNEF -) Raha toa ka tsy nahalala anao no ho faty tampoka ao anatin’ny taona iray, dia manova zavatra eo amin’ny fiainana-style.
Roa-roa) zarao amin’ny namanao zavatra mandinika tsara ny toetra mampiavaka azy. Ny anjara-dimy ny fitambarany. Roa na telo) Amin’ny fotoana izay ny fianakaviana mafy orina sy mafana. Moa ve ianao mihevitra fa ny fahazazana dia sambatra kokoa noho ny ankamaroan’ny olona. Roa dimy) Ilazao ny olon-drehetra telo fahamarinana manomboka amin’ny teny hoe»isika». Ohatra:»Isika dia samy tao amin’ity efitrano ity»roa fito) Raha ianao no lasa akaiky ny mpiara-miasa, lazao azy ny zavatra mety ho manan-danja izy, na dia fantany izany. Deuxhuit) Milaza ny mpiara-miasa inona tianao ao aminy. Mba ho tena marina sy milaza zavatra ianao, dia tsy hoe olona vao nihaona. Telo) Raha ianao no ho faty izao hariva izao, nefa tsy manana ny fahafahana mifandray amin’ny na iza na iza, fa regretteriez anao indrindra tsy ho nilaza izany. Nahoana no tsy ny efa nilaza ny izao ankehitriny izao. Telo-efatra) Ny an-trano, izay ahitana ny zava-drehetra anao manokana, mahazo ny afo. Rehefa avy namonjy ny fianakaviana, sy ny biby fiompy, dia manana fotoana ho sitrana soa aman-tsara ny zavatra tokana. Inona no mety ho.
Telo-enina), Mizara ny olana manokana, ary mangataka ny mpiara-miasa ahoana no izy no mitantana. Koa, dia anontanio ny mpiara-miasa mba hilaza aminao ny fomba heveriny ho tsapanao mikasika ity olana ity. Ny firaisana ara-nofo: tsy ny tompon-tenin ity lisitra ity fa dia tena manokana. Ny zazavavy rehetra dia tsy handeha hilalao: ny sasany amin’izy ireo dia tsy te hahalala ny ampy, ny hafa tsy tena sahisahy tao ny fanahiko, ny hafa kosa dia mahita ny fanontaniana loatra risqué ho daty voalohany. Amin’ny mahita ny lisitry ny telo fanontaniana enina, tsy maintsy hilaza aminao ihany koa fa misy ny fanontaniana tsy misy valiny. Ny voalohany toro-hevitra famitahana: mahia ho zava-dehibe eo ny fanontaniana rehetra, dia tena ilaina eo amin’ny fiainana, mba hamaritana ny zavatra mahasarika ny olona.»Fantaro ny tenanao», dia tsy miova ny fanontaniana izay mandresy. A) Raha toa ka mety hanova zavatra iray amin’ny fomba izay tsy manam-pahaizana, fa dia inona izany no hatao. Unieux) Raha toa ka tsy afaka hifoha rahampitso rehefa nahazo toetra iray na ny fahaiza-manao, mety ho inona izay. Telo-efatra) Ny an-trano, izay ahitana ny zava-drehetra anao manokana, mahazo ny afo. Rehefa avy namonjy ny fianakaviana, sy ny biby fiompy, dia manana fotoana ho sitrana soa aman-tsara ny zavatra tokana. Inona no mety ho.
Ny voalohany dia manome fahafahana antsika mba miteny ny kibo ny fahombiazana sy fifaliana. Izany no tena zava-dehibe ny mahafantatra hoe inona no fahombiazana ho an’ny vehivavy. Moa ve ianao manana izany fahitana, toy izany koa ny faniriantsika. (Izany overlaps kely ny fanontaniana eo amin’ny olo-malaza) Ny fanontaniana faharoa dia mamela anao mba scan ny sarotra, ny fanabeazana sy ny fianakaviana rohy. Mazava ho azy, misy fanontaniana hafa momba ny fianakaviana, fa izany dia mamela anao mba mivantana kendrena lesoka. Ao am-po ny firaisana ara-nofo, ny fanontaniana tena mahery vaika. Fanontaniana fahatelo afaka hanavao ny anatiny fifanoheran-kevitra ny olona. Matetika, raha efa mba hamaly, hoy aho hoe»Noho ny anjara, tiako mba hifoha sy hahafehy ny fahaiza-maka sary, na te hahazo ny sy ny hianatra hilalao ny pianô.»Ny valin’ ny tovovavy fuserait:»Fa ianao dia afaka mianatra, izay misakana.»BIM. Toy ny mpisoloky. Na inona na inona intsony ny famaliana:»kamo loatra, tsy misy ny fotoana, mafy loatra, ny tsy fahampian’ny herim-po, tsara ok tsy izany no tena zava-dehibe ho ahy.»Izany no fanontaniana hoe ahoana no handrefesana ny finiavany ny olona sy ny herin’ ny toetra amam-panahy. Ny fanontaniana fahefatra dia miresaka ianareo roa. Nahoana no hitanao. Nandritra ny ho avy maimaim-poana ny fotoana miaraka, inona moa ve ianao te-hizara. Izany fanontaniana izany dia mamela anao hifantoka amin’ny zavatra andrasana avy amin’ny tsirairay. Aho, indrindra fa tahaka ny fanontaniana farany,»ny fanontaniana ny afo.»Ny zava-drehetra may, ary afaka hamonjy ny zavatra. Io fanontaniana io dia mandeha any amin’ny manan-danja. Izany dia sarintsarim-zavatra, dia sarobidy ho fahatsiarovana. Izay iray sy ny antony. Eto aho, tsy maintsy mibaboka aminao aho fa tsy ho menatra aho raha efa mba hamaly izany fanontaniana izany, efa maro ny zavatra izay tsy maintsy tena mafy ny fihetseham-po-poana, sy very azy ireo na ny fandikana azy ireo dia ny hahatonga ahy angamba kely mampalahelo. Manampy izany ihany koa ny ohatry ny halehiben ny zava-poana fotsiny ihany ny tovovavy eo anatrehanao. Amin’izao fotoana izao ny fanatanjahan-tena: mifidy fanontaniana telo avy amin’ny lisitra-telo fanontaniana enina ho raiki-pitia, ary manazava amintsika hoe NAHOANA ianao no nifidy ireo manokana ny olana. Ao amin’ny tontolo izay ny zava-drehetra dia fady, aleoko ny hanabe ny tanora mba hisakanana azy tsy hianjera eo an-fahadisoana za-draharaha avy amintsika. Misaotra anao betsaka ireo lahatsoratra ireo. Hi. Misy ny tovovavy izay aho dredged tamin’ny oktobra, fa izy nandà ahy. Mihevitra aho fa izany dia satria nataoko Pa afaka niteny tsara.Izaho tena tia azy. Tsy hamela bebe kokoa ao an-dakilasy sy ianao ihany no mahita azy teny lavidavitra. Dia io fa mbola manana fahafahana mba hamitahany azy. Ary ahoana no handeha aho momba izany. Nieritreritra aho fa tia ahy fa hoy izy hoe: tsy izy no tiany, dia mbola namana Ahy ny olana dia ny hoe Misy ankizivavy iray fa izaho tena tia azy aho nefa rehefa te-hiresaka momba izany, dia mbola mody tsy ho liana. Avy eo dia, lazao ahy izay tokony hatao. Izany dia tsara kokoa fa tsy raikitra ny fanendrena toy izany koa fa afaka hihaino ny zavatra tsy maintsy hiteny aminy amim-pahanginana. Izany no tsara ho anareo, mba hametraka ny fanendrena toy ny namana sy hitondra ny fahafahana manaiky ny rehetra dia hahatsapa ho azy ireo. Ianao mahalala ny ahy aho, tahaka ny lehibeny (chef) fa izany no mahatonga ahy rehetra aho rehefa mila vola ny vola sasany dia manome izany ho ahy amin’ny ny olana raha toa ka matetika manantena koa izy fa mitomany eo an-toerana saingy tsy toy izany be dia be, ary vao haingana izy fisaraham-panambadiana miaraka amin’ny vadiny izany dia ny ambony, izy dia kilasy faha-ahoana no fomba hampisehoana taminy fa tia azy aho hoy izy dia ny an ny dimampolo sy ny ahy ny fanokanan-toerana ny Salama. Ahy ny olana aho tia ankizivavy iray ary fantatro koa, inona no zava-manao in-telo izy misalasala hiteny hoe eny. Fa ny olana dia ny hoe rehefa nolazaiko azy mba hampitsahatra ny mahita izy tsy te. Tsy manana ny herim-po hiteny hoe eny. Rehefa mifanatrika dia lazao amiko izay iany hamaly ahy, fa izy misalasala. Fantatro bebe kokoa izay Misy fanontaniana vitsivitsy tiako be, saingy ho ahy dia toa mbola akaiky loatra ho an’ny FOTOANA voalohany. Satria raha tokony tena valiny, dia mety ho ilaina mba hamoaka ny fahadisoany, amin’ny lafiny marefo. Ary izany indrindra no tokony tsy ho voalohany na faharoa FANENDRENA. Dia aloha loatra. Izany dia mazava ho azy fa ilaina ny mametraka fanontaniana toy izany ny tena hahafantatra ny tovovavy manoloana antsika, jereo ny fifanarahana, fa isika dia mila tsy manambara ny tsy ampoizina, izany dia tsy ny fotoana. Ka heveriko fa mety ho tranga-vava ny fifandraisana. Tsy tokony ho be loatra mba hanome azy rehetra eo. Ary heveriko fa afaka manome ny fifanakalozan-kevitra matotra loatra, raha tsy hoe tsy tsara izy ireo fantatra mba dranomasina miaraka amin’ny hafa ny manoratra. Eny, mihevitra aho fa tokony tsy mamatotra azy ireo tahaka ny rehetra fa saingy alternating amin’ny maivana ny zava-drehetra. Marina, fa dia tahaka ny lisitra izay dia afaka manao arakaraka ny fotoana sy ny mari-pahaizana momba ny firaisana ara-nofo nandritra ny fanendrena. Rehefa mijery eo amin’ny toerana, mampiasa mofomamy (anisan’izany ny Google Analytics) mba handrefesana ny mpihaino sy hampitombo ny antontan’isa mba hanatsara ny fampandehanana ary hanolotra anareo afa-po mifanaraka ny mahaliana
← Mba ho zatra na ho tsara ny zavatra iray